WARBIXIN: Liiska AFAR Ciyaartoy Oo Ay Man United Bedelka Paul Pogba Ka Dhiganayso Oo Banaanka La Keenay - Akhriso Oo Go'aami Haddii Ay Awoodaan Inay Bedelaan Pogba. - Gool24.Net
Waxa jirta hubaanti la’aan ka taagan mustaqbalka khadka dhexe ee kooxda Manchester United ee Paul Pogba iyadoo ay maalinba maalinta ka dambaysa isasoo tarayaan wararka la xidhiidhinaya Real Madrid oo uu qudhiisu si balaadhan u amaanay.
Pogba ayaa sheegay in Real Madrid oo uu tababare ka yahay Zinadine Zidane ay tahay mid khaas ah oo uu ciyaartoy kasta ku riyoodo isaga oo amaantaas midii jawaabteeda ahayd ka helay dhinaca Zidane.
Pogba ayaa haya wadadii uu kaga bixi lahaa Old Trafford marka laga yimaado inuu soo qaatay xilli ciyaareedkii uu ugu xogta wanaagsanaa isaga oo 13 gool iyo 9 caawimo kasoo sameeyay horyaalka sidoo kalena qayb ka noqday shaxdiisa sanadka.
Dhinaca kale waxa la fahamsan yahay in Ole Gunnar Solskjaer uu doonayo inuu sii haysto 26 jirkan oo uu koox xoogan ka hareero dhiso isaga oo xataa ku fikiraya inuu kabtan ka dhigto.
Haddaba, Waxaanu halkan ku muujin doonaa afar xiddig oo khad dhexe ah oo ay Man United bedelka Pogba u bar-tilmaameedsan karto haddii uu rumeeyo riyadiisa Real Madrid.
Adrien Rabiot – PSG – Qiimahiisa (Xor)
Rabiot ayaan shantii bilood ee ugu dambeeyay u ciyaarin PSG kaddib markii uu diiday heshiis kordhin balse waxa uu noqon karaa dookh fiican oo qaab xor ah lagu heli karo.
Rabiot ayaa Pogba kula soo ciyaaray xulka France waxaana booskiisa uu doorbidaa uu yahay khadka dhexe ee bidixda si lamid ah Pogba isaga oo haysta faa’idada ah inuu bidixle yahay.
Ruben Neves – Wolves – Qiimahiisa (40 Milyan)
Maaha mid wali lala xidhiidhinayo Man United balse waxa uu noqon karaa mid soo jiita kaddib wacdarro uu ku dhigay kooxdiisa Wolves xilli ciyaareedkiisii ugu horreeyay ee Premier League iyo xilli ciyaareedkii ka horreeyay ee horyaalka heerka labaad.
Neves ayaa leh degenaansho khaas ah marka uu kubadda haysto waxaana uu naftiisa ka dhigay mid lagu sifeeyo ciyaartoy dajin kara heerka kulanka kaas oo ah wax ay Manchester la’ayd tan iyo Michael Carrick.
Sergej Milinkovic-Savic – Lazio – Qiimahiisa (80 Milyan)
Mid kamid ah khadadka dhexe ee ugu heerka sarreeya ee ay Man United heli karto, Milinkovic-Savic ayaa leh dhammaan calaamadaha Pogba haddiiba ay Man United doonayso inay bedel uga dhigto.
Youri Tielemans – Monaco – Monaco
Xiddigan amaahda ku jooga kooxda Leicester City ayaa soo jiitay indhaha kooxo badan, Iyadoo uusan qaab wanaagsan kaga soo bixin Monaco ayuu isku muujiyay Leicester kaddib saddex gool iyo shan caawimo oo uu ku sameeyay 13 kulan gudahood.
Haddiiba aad tahay shaqsi taageere u ah Man United miyay afartan xiddig kuula muuqdaan kuwo qaadi kara masuuliyada khadka dhexe ee Paul Pogba uu ka hayo Old Trafford ?